PressReader - Isolezwe: 2019-01-14 - ISiwelele incishe uKomphela amaphuzu
ISiwelele incishe uKomphela amaphuzu
Isolezwe - 2019-01-14 - EZEMIDLALO - INTATHELI YESOLEZWE Bloefontein Celtic (1) 1 Golden Arrows (0) 1
USTEVE Komphela ocija iLamontville Golden Arrows uhlulekile ukubuya namaphuzu amathathu ngesikhathi ebhekene neqembu lakhe elidala iBloemfontein Celtic emdlalweni we-Absa Premiership eDr Molemela Stadium, eBloemfontein, izolo ntambama.
Emdlalweni wayizolo bekubhekwe ukuthi uKomphela uzofike azidlulele kalula kwiSiwelele esingenaye umqeqeshi futhi esinenkinga yemali. ULehlohonolo Seema uyena obambile ngemuva kokushiya kukaKomphela.
Nokho kuhlaluke zisuka ukuthi iCeltic ibingazimisele ngokudedela amaphuzu kalula idlalela ekhaya. I-Arrows ibiwuqale kahle umdlalo kodwa iCeltic yangayivumela ukuthi ithole igoli. Iyona iCeltic egcine isiyingozi kakhulu uma iya phambili futhi akwethusanga ukuthi ithole igoli kuqala ngaphambi kokuthi ziye ekhefini.
Igoli lize noKabelo Dlamini kwashintshwa kungu 1-0. Ngesiwombe sesibili uLucky Baloyi ucishe wathola igoli ngomzuzu ka-53 kodwa ibhola lakhe laphuma phezu kwepali. Amazinga okushisa abephezulu kakhulu eBloemfontein nobekuphoqa unompempe ukuthi abuye amise umdlalo ukuze abadlali baphuze amanzi.
Ngomzuzu ka-64 i-Arrows igcine ilitholile igoli lokulinganisa ngesikhathi uKnox Mutizwa eshaya igoli lakhe lesine lesizini ngemuva kokuthola ifree kick. Yize kuphele umdlalo i-Arrows sekuyiyona ephethe umdlalo futhi kucaca ukuthi ingase ithole igoli lokuwina kodwa yehlulekile ukugqobhoza udonga lweCeltic. Umdlalo uphele ngo 1-1.
I-Arrows inomdlalo onzima ngoMgqibelo ezovakashela kuwo iBlack Leopards eThohoyandou Stadium ngo8.15 ebusuku. Amaqembu amaningi e-Absa Premiership akuthola kunzima ukubuya namaphuzu kule nkundla yeLeopards
nKhonamanjalo iKaizer Chiefs iphume ekamabuyaze eNdola, eZambia, ithelwa othulini ngo 3-1 yiZesco United emdlalweni weCAF Confederation Cup izolo ntambama. Umdlalo womlenze wesibili uzodlalwa ngoMgqibelo eNingizimu Afrika. IChiefs kumele ishaye amagoli amabili ingadedeli lutho ukuze idlulele esigabeni samaqoqo somqhudelwano. Nokho ngaphambi kwalokho kumele izame ukuthola amaphuzu amathathu uma isibhekene naMaZulu emdlalweni wePremiership eKing Zwelithini Stadium, eMlaza, ngoLwesithathu ebusuku.